IPhone 7 Hillaaca EarPods ayaa mar kale ku soo muuqanaya sawirka | Wararka IPhone
Waxaan dareemayaa inaan ku soconayno heer ku dhow soo daadan / xanta maalin kasta. Waana taas qiyaastii 24 saacadood ka dib moodooyinka ama moodooyinka bandhigga ee iPhone 7 soo muuqday, maanta isla dhexdhexaad ayaa daabacay dhowr sawir oo ah waxa uu noqon lahaa sameecadaha dhagaha ee imaan doona sanduuqa ku dheggan iPhone 7. Mid ka mid ah qodobbada ugu muranka badan ee taleefannada casriga ah ee soo socda ayaa ah in ay imaaneyso iyada oo aan la heysan deked headphone iyo waxa sawirradu muujinayaan qaar Danab EarPods, taasi waa, sameecadaha dhagaha sida kuwa ay soo bandhigeen sanadkii 2012 laakiin leh isku xira danab halkii laga heli lahaa jaakada 3.5mm.
Sawirada, markan oo tayo sare leh oo muujinaya Xaragada EarPods xagal kasta oo suuragal ah, ayaa kasoo muuqday marka hore Weibo Mar dambe ayaa lagu daabacay wargeysyada Faransiiska oo ah, haddii ay dhacdo inaadan aqoon, ayuu qoray Steve Hemmerstoffer, oo caan ku ah inuu yahay OnLeaks, taas oo dad badani ay tahay shaandhada ugu fiican ee xilligan. Faransiisku waa kan kashifaya turjumaano kala duwan iyo waxyaabo kale oo badan oo ka mid ah iPhone 7 iyo moodalkii hore, iyo sidoo kale aalado kale oo aan shaqo ku lahayn Apple.
Ma kuwani waa hillaaca EarPods ee la imaan doona iPhone 7?
Ma jiraan wax gaar ah oo ku saabsan waxa sawirradu muujinayaan. Xaqiiqdii, waxay ku saabsan tahay samaacadaha dhagaha, ugu yaraan banaanka, waxay si sax ah ula mid yihiin EarPodskii lagu soo bandhigay iPhone 5, laakiin leh isku xiraha cusub, taas oo naga dhigaysa inaan la yaabno waxa ku dhici doona samaacadaha dhegaha leh 3.5mm horey ayaan u haysanay. Xanta ayaa sheegatay in Apple ay ku dari doonto sanduuqa a Adabtarada danab-3.5mm si aan usii wadno adeegsiga dhagaha kale, laakiin waxaa kamid ah LightPage EarPods waxay iga dhigeysaa shaki shaki macquul ah. Xanta kale ayaa sheegatay in Apple ay soo saarayso ugu yaraan xoogaa sameecado gaar ah oo aan lahayn wax fiilooyin ah, taasi waa, waxay noqon doonaan oo keliya waxa aan dhegta gelino. Dhinaca kale, sameecadaha dhagaha la ', oo loo yaqaan' AirPods ', waxay yeelan karaan baajinta dhawaaqa.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, labadaba sawirada cusub ee hillaaca EarPods iyo sameecadaha dhagaha ee ay tahay inay soo bandhigaan wali si rasmi ah looma sameyn, waana wax suuragal u ah inay dhacaan bisha Sebtember.
CusboonaysiiSida laga soo xigtay NoWhereElse, barta soo dhigtay sawirradan daqiiqado ka dib markii ay ka soo muuqdeen Weibo, sawirradu ma ahan kuwa rasmiga ah ee Apple ee EarPods.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 7 » IPhone 7 Lightning EarPods ayaa dib uga soo muuqanaya sawirka
Sidee ugu dhiirran kartaa inaad weydiiso ¨Haddii kuwani yihiin hillaaca EarPods ee la imaan doona iPhone 7? ¨, haddii aad isla markiiba aragto tayada liidata iyo naqshadeynta liidata ee kuwan
Ku jawaab David Hernandez
Ilaha "lagu kalsoonaan karo" waxay xaqiijineysaa in batteriga iPhone 7 uu ka weynaan doono kan iPhone 6s